Man United Vs Sevilla: Rajada U Bixitaanka Wareega Xiga Kadib Bar-barihii Lugtii Hore – Kooxda.com
Home 2018 March Ingiriiska, Spain, Wararka Maanta Man United Vs Sevilla: Rajada U Bixitaanka Wareega Xiga Kadib Bar-barihii Lugtii Hore
Man United Vs Sevilla: Rajada U Bixitaanka Wareega Xiga Kadib Bar-barihii Lugtii Hore
Waxa maanta la dhamaystiri doonaa qayb ka mid ah wareega 16-ka tartanka champions league iyada oo kooxda Man United garoonkeeda Old Trafford kula ciyaari doonto kooxda Sevilla xilli ay labada kooxoodba isha ku hayaan in ay u gudbaan wareega 8 dhamaadka tartanka.
Kooxda Sevilla ayaan waligeed guul ku gaarin kulamada ay ku ciyaarto England taariikhdeeda tartamada yurub laakiin waxa ay ku gashay 3 bar-baro iyada oo haatanba ogsoon in bar-baro 1/1 ah iyo wixii ka badan ay kaga filantahay in ay u gudubto wareega xiga ee tartanka.
Cel-celis ahaan kooxaha ka gudbay wareega tooska loo haro marka ay garoonkeeda bar-baro 0/0 ah ku soo galaan garoonkooda ahaa ay 70% iyaga oo 21 kooxood oo ka mid ah 30 kooxood ay u gudbeen wareega 8 dhamaadka tartanka markii ay garoonkooda bar-baro 0/0 ah ku soo galeen.
Kulankii kooxaha Man United iyo Sevilla ee ka dhacay Spain ayaa ku soo dhamaaday bar-baro 0/0 ah taas oo la macno ah in Man United looga baahan yahay in ay guul gaarto si ay ugu gudubto wareega xiga halka bar-baro 1/1 ah iyo wixii ka badan ay Man United ku hadhayso.
Xogta ayaa muujinaysa in ay Sevilla ku dhibaatoonayso dhanka daafaca iyo weerarkaba iyaga oo kaliya dhaliyay 36 gool horyaalka La Liga halka laga dhaliyay 42 gool taas oo ah rikoor xun oo kooxaha ugu sareeya horyaalka La Liga.
Kooxda Man United ayaa dhankeeda laga badiyay hal kulan oo ay ku ciyaartay garoonkeeda champions league waxana ka badiyay kooxda Real Madrid halk ha ay 5 kulan oo kale oo kooxaha reer Spain ay la ciyaartay 3 kulan badisay laba kalena bar-baro gashay.